सिर्जना, कला र विचारको त्रिवेणी: August 2009
अहिलेझैँ थिएन, त्यसबेलाको साहित्यिक वातावरण । एउटा कविले अर्को कविलाई नचिन्ने प्रश्नै उठ्दैनथ्यो । थोरै जनसंख्या, थोरै साहित्यकार सायद एउटै परविारझैँ लाग्थ्यो । मैले काठमाडौँ प्रवेश गरेको त्यो '३० को प्रारम्भिक वर्ष । भूपीका विद्राेही कविताहरू, सरल र सम्प्रेषणीय कविताको एउटा धार अनि मोहन कोइराला प्रवृत्तिको अर्को धार । '३० को प्रारम्भिक वर्ष जब हामी युवा कविहरू कवितामा सक्रिय हुन खोजिरहेका थियौँ, हामीलाई भूपीको धारले छोयो । तत्कालीन पञ्चायती प्रणालीले उब्याएको विद्रोही भाव, केवल त्यही असन्तोष, पीडा र सकसले निम्त्याएका अनुभूतिहरू कविताका विषय हुन्थे । अमूर्त प्रस्तुतिभन्दा अलि भिन्नै हाम्रा कविताका प्रस्तुतिहरूले हामीलाई ह्वात्तै परििचत गरायो तत्कालीन साहित्यिक माहोलमा । लगातारको साहित्यिक जमघटले लाग्थ्यो, एउटा सिंगो परविार थियो साहित्यकारहरूको । र, अहिले सम्झन्छु, कवि केदारमान व्यथित जो त्यसबेला हाम्रालागि कविताको सिंगो हिमाल थिए । जीवन्त व्यक्तित्व उनका कविताका मूल्यांकन गर्ने समालोचकहरू छन्, मेरो विषय त्यो होइन । अहिले मैले सम्झन खोजेको प्रसंग बेग्लै छ । बेग्लै यस अर्थमा कि उनी त्यसबेलाका हामीजस्ता युवा कविहरूका लागि एउटा बलियो प्रेरणा दिने व्यक्तित्वका रूपमा चिनिन्थे । अनायास उनलाई नै सम्झनु पर्ने कारण अनेक छन् । हामी सबैले बिर्सियौँ त्यो पुस्तालाई । एउटा कविले अर्को कविलाई चिन्न नसकिएको वर्तमान कविका लामो सूचीमा कसले कसलाई चिन्ने ? कसले कसलाई सम्झने ? एउटा पुस्तक छापिँदा चर्चाको शिखर चुम्ने त्यसबेला सायद थोरै साहित्यकार हुनु मात्रै कारक तत्त्व पक्कै थिएन । एकअर्काप्रतिको सम्मान भाव र अग्रजप्रति पछिल्लो पुस्ताको आस्था पनि त्यत्तिकै कारण थियो । केदारमान व्यथित त्यसमाथि त्यस्ता कवि थिए, जो आफूपछिका सर्जकहरूलाई माया मात्रै होइन, स्वयं सम्मान गर्थे । आफूपछिका पुस्ता, खासगरी युवा पुस्तालाई अग्रजले पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मैले दुई जना मेरा अग्रज कविहरूबाट सिकेँ, ती हुन् केदारमान व्यथित र कवि वासु शशि । यी दुई कविहरूको सानिध्यले मलाई धेरै कुरा सिकाएको छ । अहिले कवि केदारमान व्यथितका प्रसंगहरू लेख्ने जमर्को गर्दैछु । केदारमान व्यथित, जसलाई मैले '३० कै प्रारम्भमा भेट्न पाएँ । त्यसबेला वृद्धावस्थातिर उक्लिरहेका उनको शारीरकि व्यक्तित्व नै प्रभावशाली लाग्थ्यो । उनको कविता वाचन प्रस्तुतिकलाले श्रोताहरू स्तब्ध हुन्थे । जब उभिन्थे मञ्चमा कविता वाचनका लागि, त्यो वृद्धावस्थामा पनि उनी कण्ठस्थ वाचन गर्थे । धाराप्रवाह कविता वाचन गर्ने उनको कला अद्भुत थियो । जब केही बोल्थे, मानौँ कवितै वाचन गररिहेजस्तो । उनी निडर थिए, पञ्चायतको उत्कर्ष कालमा पनि प्रशासन, मन्त्री वा सत्ता पक्षका जमेर आलोचना गर्थे । चाँदनी शाहका कमजोर कविताहरूका अतिशयोक्ति प्रशंसा गर्नेहरूको त्यो समयमा कैयौँपटक गोष्ठी, सभाहरूमा व्यथितले भनेको सुनेको छु, 'पारजिातले जस्तो लेख्न अझै धेरै सिक्नु छ चाँदनी शाहले ।' राजपरविारका सदस्यलाई यति मात्रै पनि भन्नु वास्तवमै साहसै चाहिन्थ्यो, त्यसबेला । हुन त भन्नेहरू भन्थे व्यथितलाई पञ्चायतकै पक्षधर हुन् भनेर । भन्थे, राजपरविारकै आशीर्वाद रहेका प्रसंगहरू । पञ्चायतीकालमै शिक्षा र गृहमन्त्री भइसकेका पनि हुन् उनी । महेन्द्रले प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको पहिलो कुलपति पनि नबनाएका होइनन् ।तर, मैले उनीसँगको सानिध्यमा राजाको गुनगान वा पञ्चायतका गन्धहरू कहिल्यै अनुभव गरनिँ । उनको विगतसँग म सायद परििचत थिइनँ । मैले भेटेको कवि व्यथित '३० को दशकतिर जतिबेला म देख्थेँ, उनको निडरता । साहित्यप्रतिको उनको लगाव र साहित्यकारहरूका लागि खुलेरै लाग्ने प्रवृत्ति । वृद्धावस्थाका दिनहरूमा पनि उनको लेखन कहिल्यै निष्त्रिmय भएन । लेखनको निरन्तरता एउटा सबल पक्ष त छँदै थियो तर उनी केवल लेखेरै मात्रै सन्तोष मान्दैनथे । उनमा एउटा अद्भुत सांगठनिक गुण थियो । कविका पक्षमा वकालत गर्ने, कविहरूको निरन्तर भेला गराउने । उनको घर स्वयं एउटा काव्यिक थलो लाग्थ्यो । निरन्तरको काव्यिक भेला खासगरी युवा कविहरूको जमघट । अरू कविहरू आफ्ना कविता सुनाउन आतुर हुन्छन् तर कवि व्यथित अरूका कविता सुन्न आतुर हुन्थे । कवि व्यथितको उत्तरार्द्ध कवितै कवितामा बितेको देखेँ मैले ।अहिले पुस्ता-पुस्ताबीच खाडलझैँको स्िथति छ साहित्यमा । सायद संख्यात्मक दृष्टिले धेरै साहित्यकर्मीहरू जन्मिसकेका छन् । पुस्तक विमोचन नभएको कुनै दिन छैन । पुस्तक प्रकाशनको भीड छ अहिले । पढेर भ्याइनसक्नु पुस्तकहरू छन् अहिले । फाट्टफुट्ट छापिनुको त्यसबेला रूपरेखाले धानेको थियो । मधुपर्क, गरिमा क्रमशः झाँगिँदै गए । थोरै प्रकाशन, धेरै चर्चा सायद स्वाभाविक पनि हो । अहिलेको जस्तो विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको भीड पनि त थिएन । अहिलेजस्तो महँगीको भीड पनि त थिएन । जीवनको दौडधुप र व्यग्रता पनि त थिएन तथापि केदारमान व्यथितजस्ता व्यक्तित्व नहुँदा हुन् त त्यसबेला पनि त्यो गोलबद्ध र पारविारकि स्िथति कहाँ हुन्थ्यो र ! त्यसबेला पनि त व्यथितकै समकालीन कविहरू एक्लै रमाउन चाहन्थे । कवि व्यथित तर तीभन्दा भिन्दै थिए । सायद साहित्यकै अभिभावक । यसो हुनुमा अग्रजप्रतिको सम्मानभाव त पक्कै जरुरी छ तर जरुरी छ, आफूमुनिका पुस्ताप्रति अग्रजको माया र सम्मानभाव पनि । यस अर्थमा कवि व्यथितको स्वभाव अद्भुत थियो । युवा पुस्तालाई त्यति धेरै माया थोरै अग्रजहरू मात्रै गर्छन् । माया केवल भावनामा होइन । केवल शब्दमा होइन । एउटा अद्भुत क्षमता थियो कवि व्यथितमा, युवा पुस्तासँगै हातेमालो गरी हिँड्ने । दम्भहीन, स्वार्थहीन हृदयको नाता । सायद यसैले उनी अभिभावकझैँ लाग्थे । अग्रजसँगको गहिरो नाताको त्यो अचम्मलाग्दो नमुना लाग्थ्यो ।'३० को प्रारम्भिक वर्ष काव्यिक भेलाको प्रसंगलाई सम्झन पर्दा अहिले पनि रोमाञ्चित हुन्छु म । बृहत् काव्यिक भेला कहिले धरान-धनकुटा । कहिले विराटनगर । कहिले पोखरा, कहिले नेपालगन्ज त कहिले पाल्पा । राजधानीका झन्डैझन्डै सबै नाम चलेका कविहरू अनि अन्यत्रबाट पनि नाम चलेका प्रायः सबै भेला हुँदाको त्यसबेला अब त सपनाजस्तो लाग्छ । धुलाबारीको त्यो बृहत् काव्यिक भेला, नेपालगन्जको त्यो अद्भुत भेला । बसका बस, दुई-तीनवटा बसभर िकविहरू जन्तीको लर्कोझैँ । न प्रगतिशील कविहरूको मात्र जमघट, न अप्रगतिशीलहरूको मात्र जमघट, साराका सारा कविहरूका ती भेला, गोष्ठी, सम्मेलन, '३० को दशकपछि क्रमशः पातलिँदै पातलिँदै एउटा घेराभित्रको सीमामा बाँधिएर गयो । ती भेलामा केदारमान व्यथितको पुस्तादेखि नयाँ पुस्तासम्मको सहभागिता आकर्षणका केन्द्रविन्दु त हुन्थे नै, सबैबीचको मित्रवत व्यवहार र एउटा पारविारकि स्िथति अहिले खोज्दा खोइ कहाँ भेटिएला ?केदारमान व्यथितलाई सम्भ“mदा यसरी एउटा सिंगो समय स्मृतिमा ब्यूँझेर आउँदोरहेछ । एउटा युग हाँकेर सानदार जीवन बाँचेको त्यो व्यक्तित्व अब स्मृतिबाट पनि हराउँदै बिलाउँदै जाँदो छ । कसले कसलाई सम्भिmने ? लथालिंग छ प्रज्ञाप्रतिष्ठान । मौन छन् अग्रजहरू । वैयक्तिक प्रयासले बाँचिरहेको छ साहित्य ।नेतृत्व राजनीतिमा मात्र किन, साहित्यमा पनि चाहिँदो रहेछ । वकालत गरििदने त्यो व्यक्तित्व जसले बोल्दा मात्र पनि लथालिंग हुनुबाट जोगिन सकोस् । खोइ त्यो व्यक्तित्व ? गत साल माओवादी सरकारबाट गरएिको प्रज्ञाप्रतिष्ठानको त्यो नियुक्ति, त्यो लथालिंग र अमर्यादित क्ष्ाण । यस्तै बेला हो, अग्रजले बोलिदिनुपर्ने । अग्रजले सम्हालिदिनु पर्ने । अग्रजले खबरदारी गरििदनुपर्ने । केदारमान व्यथित यस अर्थमा त्यही कोटीका अग्रज थिए, जसको खबरदारीमा पत्याउन गाह्रो पर्दैनथ्यो र राजनीतिज्ञ, मन्त्री वा कुनै सत्तालाई एकछिन सोच्न बाध्य पार्दथे । सबैमा कहाँ हुन्छ र त्यो खुबी, त्यो क्षमता । साहित्य लेखेरै मात्रै कहाँ पुग्दो रहेछ र ! पुस्तक छापिएरै मात्रै कहाँ हुँदो रहेछ र ! तिनको पनि व्यवस्थापन हुनुपर्ने रहेछ, नत्र लथालिङ्ग हुँदो रहेछ ।कविता त अहिले पनि लेखिएकै छ । पुस्तक त छापिएकै छन् । स्तरीयताका प्रश्नमा कसैले औँला ठड्याउनुपर्ने अवस्था पक्कै छैन । तर पनि समग्रमा राष्ट्रले एउटा थिति बसाइदिनुपर्ने हो । सिस्टम हो चाहिने । नेता, पार्टी वा सत्ताले आफैँ सीमा खोज्दो रहेछ । आफ्नै वृत्त खोज्दो रहेछ । डोर्‍याउने त्यो व्यक्तित्व त कवि नै चाहिँदो रहेछ । व्यथितजस्तो । ...सायद यसैले सम्भिmरहेछु, त्यो विशाल व्यक्तित्व ।
Posted by Narthunge at 2:39 AM No comments:
मालिकहरूको तरबारलेटाउको काट्छ कि फूल ? भ्रममा परेँ म
हजुरहरूको बन्दुकले विचार ढाल्छ कि मान्छे ? भ्रममा परेँ म
यस राज्यलाई प्रजाले बनायो कि राजाले ? भ्रममा परेँ म ।
त्यतिबेला कवि श्रवण मुकारुङले कथेको यस कविताले साहित्यिक जमातहरूमा मात्र होइन, आमजनमानसमा समेत तरंग ल्याएको थियो । श्रवणले इतिहासको एउटा सामान्य पात्र बिसे नगर्चीलाई कवितामा ब्यूँझाएर समग्र देशकै विचलन र अव्यवस्थाको हृदयस्पर्शी चित्रण गरेका थिए । जनआन्दोलनअघि नेपालमै छापिएको यस कवितालाई उछिन्ने अर्को कविता त्यसपछि जन्मिएन । आन्दोलनको सेरोफेरोमा राजाको शासनका विरुद्धमा थुप्रै साहित्यिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू भए । धेरै कविले अनेकौँ कविताहरू वाचन गरे । तर, श्रवणको 'बिसे नगर्चीको बयान'को प्रभाव र स्तरको उचाइभन्दा माथि उक्लन सक्ने कविताहरू सुनिएनन् । २००७ सालको क्रान्तिताका कवि गोपालप्रसाद रमिालले लेखेको 'एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ' कविताले त त्यस समयदेखि आजसम्म नेपाली काव्य संसारमा हलचल ल्याई नै रहेको छ । तर, कवितामा भनेझैँ सम्पूर्ण समाजलाई एउटै सिर्जनामा बाँध्न सक्ने रचना भने साँच्चि नै एक जुगमा एकपल्ट मात्र आएको अनुभूति हुन्छ ।०३६ सालको जनआन्दोलनका बेला कवि हरभिक्त कटुवालले लेखे ..........
ःबन्धन र बाध्यतामा बाँच्नु पनि के बाँच्नू ?
आँसु लुकाई गहमा हाँस्नु पनि के हाँस्नू ?
साँच्चै भन्ने हो भने ०३६ को कालखण्डपछि '६० को दशकसम्म अनेकौँ कविहरू जन्मिए र तिनका कलमले गन्तीहीन कविताहरू रचे । कविता स्तरका दृष्टिले फितलै भएका पनि होइनन् । तर, आमपाठक, जो साहित्यिक शिल्प र सौन्दर्यसँगै आफ्नो समयलाई पनि बुझन् कविता पढ्छ, त्यस्ता पाठकलाई सम्झाइरहने सारै थोरै कविता लेखिए । त्यसैले, ००७ सालको कवि रमिालको 'एक जुगमा...' र ०३६ सालको हरभिक्तको 'बन्धन र बाध्यता'पछि एकैचोटि लामो समयलाई फड्को मारेर जन्मेको कविता हो, मुकारुङको 'बिसे नगर्ची...' ।कविता नलेखिएका होइनन् । झन् ०४६ पछि त कविताहरूको ओइरो लाग्यो । "अहिले त कविहरूको पल्टन छ, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका पक्षमा यिनीहरूले पल्टनी गररिहेछन्," ०४६ सालको 'सडककविता-क्रान्ति'का एक आन्दोलनकारी, कवि भवानी घिमिरे भन्छन्, "अब राज्यको रक्षा सेनाले होइन, कविले गर्छन् ।" तर, तिनका कविताले पल्टनी नगरेको धेरै भयो । "मानिसको ध्यान तान्ने मार्मिक कविता नलेखिएका हुन् या मार्मिक कवितामा मानिसको ध्यान केन्दि्रत हुन नसकेर हो तर प्रतिनिधिमूलक कविता सुन्न नपाएको धेरै भयो ।" समालोचक कृष्णचन्द्रसिंह प्रधानका यी भनाइले नेपाली कविताको पाठक र कविलाई नङ-मासुको साइनोमा गाँस्ने क्रम भंग भएको अनुभव हुन्छ । '३० को दशकदेखि झन्डै '४० को अन्त्यसम्म कविहरूमा आपसी भेटघाट र भलाकुसारी बाक्लै हुने गथ्र्यो । एकअर्काका कविता सुन्ने र विचार साट्ने परम्पराले नेपाली कवितालाई एउटा न्यानो बाटोमा स्नेहपूर्वक डोर्‍याउने काम गररिहेको थियो । नयाँसडकको पीपलबोटमुनि हरेक सन्ध्या साहित्यकारहरूको जमघट हुने गथ्र्यो । यसले सिर्जनामा लाग्न मात्र होइन, एउटा स्रष्टालाई अर्को स्रष्टासँग जोड्न पनि सघाइरहेको थियो । "त्यसबेलाका केही ठाउँ र वातावरणले सर्जकलाई आपसमा गाँसेको थियो," कवि घिमिरे सम्झन्छन्, "तर, व्यस्तता र समयको अभावका कारण आज त्यो क्रम समाप्त भयो ।" कवि श्रवण मुकारुङका विचारमा कथित 'वाद' र 'गुट'ले विभाजनका रेखा कोरेका हुन् । "यो सिर्जनाको शून्य समय हो, के लेख्ने भन्ने दोधार छ कविलाई ।" श्रवण आफ्ना यी भनाइहरूसँग के पनि थप्छन् भने गोपालप्रसाद रमिालको 'एक जुगमा एक दिन', हरभिक्तको 'बन्धन र बाध्यता' या उनी स्वयंको 'बिसे नगर्ची' होस्, विशेष अवस्थामा जन्मिने सिर्जना हुन् । त्यसैले यस्ता कालजयी सिर्जनाहरूको सधैँ अपेक्षा गर्नु उचित छैन । हो, विचार र अभिव्यक्तिले शासन गररिहेको आजको जमानामा कविताले मानिसको विचारलाई आफ्नै शैलीमा भुटिरहेको हुन्छ । कविताले मानिसलाई विचारमा बाँधेर भूमण्डलीय दृष्टिकोणको व्यापक क्षितिजतर्फ डोर्‍याउँछ । तर, नेपाली कवितामा धीत मर्ने पुरानो रसमा भिज्दै आएको त्यो पुस्ता वा त्यस कालखण्डलाई नजिकबाट अध्ययन गर्दै आएको यो पुस्ता आजको सिर्जनाबाट तृप्त हुन सकिरहेको छैन । किन त ? "पहिलो त भेटघाटको उपयुक्त थलोको अभावले नै यसो भएको हो," प्रधान सम्झना गर्छन्, "त्यसबेला रन्जना गल्लीको रश्मि रेस्टुँरा या पीपलबोट, मोनआमी भिडियो पसलछेउको सानो चिया पसल होस्, त्यहाँ गएर कवि-लेखकहरू आ-आफ्ना अभिव्यक्ति साटासाट गर्थे ।" यी पक्षहरूको अनुपस्िथतिले आजको समयचेतनाको उर्वरता र प्रविधिको विकास अनुकूल सिर्जनाहरू जन्मिन सकिरहेका छैनन् । कवितै नलेखिएको अवस्था पनि होइन र सशक्त कविताहरू पनि आइरहेका छैनन् । तर, कवि गोपालप्रसाद रमिालको 'एक जुगमा एकचोटि'को आशय घिसि्रघिस्री हिँडिरहेको छ । सुन्दा या पढ्दा नै मानिसलाई मनमस्ितष्क उचाल्ने कविताको अभाव छ अहिले । "छोटोमा पनि धारलिो कविता आउन सकेको छैन ।" समालोचक प्रधानका विचारमा 'सुन्न नचाहँदानचाहँदै पनि सुन्न कर लाग्ने' कविता आउन सकेनन् । 'सडककविता क्रान्ति'का एक सशक्त योद्धा अशेष मल्ल त्यसबेला उनीहरूका कविता सुन्न एउटै श्रोता विभिन्न ठाउँमा आउने गरेको अनुभव सुनाउँछन् । उनका विचारमा त्यसबेला पञ्चायतको क्रूर चरणमा कविताले नै मुक्तिका लागि शंख फुकेको थियो । मुक्ति खोजिरहेका जनता कवितामा सानो विरोध आउँदा पनि जुर्मुराउँथे । शासकहरू पनि सानो कुरामा उत्तेजित हुन्थे । विषयवस्तुका हिसाबले त्यसबेलाका कविताहरू सशक्त भएको ठान्छन् मल्ल ।आज पनि सशक्त कविताहरू त लेखिँदैछन् । कवि भूपीको डोबमा पाइला राख्दै अघि बढेको पुस्ता-कवि चेतना र अभिव्यक्तिका रूपमा पहिलेकै तुलनामा परस्िकृत रूपमा आइरहेको छ । तर, समाजलाईर् नै आन्दोलित पार्ने र एउटा युगलाई नै डोर्‍याउने अर्थमा सारै थोरै कविताहरू आइरहेछन् । कतै कविता अर्को कुनै युगको प्रतीक्षामा त छैन ?
Posted by Narthunge at 2:22 AM No comments: